EPONT 2.5Ton Haydarooliga Floor Jack for sale
EPONT 2.5T Haydarooliga Floor Jack Isticmaalka Car
Waxaan nahay Zhejiang Yipeng Makiinado Co., Ltd. --- EPONT, waxyaabaha Our waxaa intooda badan laga dhoofiyay in ka badan 30 dal sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo macaamiisha etc.Our waxaa ka mid ah dad badan oo macaamiisha OEM ku takhasusay tareen, gaari, forklift iyo mashiinada dhismaha, aynu hore u soo maray iskaashiga ka badan 10 ka mid ah worldâ ka € ™ s Top 500 shirkadood mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha shubay ay waaweyn ee Shiinaha.
1.We leeyihiin 4 khadadka-soo-saarka iyo 2 khadadka-soo-saarka daaweynta kulaylka, maalin maalmaha ka mid Jack dhalada laga yaabaa in aan soo saaro oo ku saabsan 5000pcs, oo ku saabsan Jack dabaqa laga yaabaa in aan soo saaro 500pcs ah.
Shirkadda 2.Beerta daboolaa aag of 1,7000 mitir oo laba jibbaaran, ka qaadataan shirkadda "-SAMIDA ku salaysan, tayada ugu horeysay" falsafada ganacsiga, si ay u siiyaan macaamiisha la soo saarka oo tayo leh, si tartiib tartiib ah, ka mid ah sameynta sumcad wanaagsan in industry ee a, miisaanka ganacsi u korayo. YIPENG rumaysan oo aad ku biiro, waxaa jiri doona berri ka wanaagsan, waxay aaminsan yihiin YIPENG, dooran YIPENG, biiraan YIPENG, waxaan idin siin doonaa adeegga ugu wanaagsan iyo damaanad.
Shirkadda 3.Beerta ku qalabeysan yahay CNC lathe, mishiinka axdi qarameedka, mashiinka shiidi doona, imtixaanka load ma guurto ah, mashiinka baaritaanka load firfircoon, Rockwell ahaatid engegnaantiinna aawadeed, YASKAWA alxanka robot, processing feer iyo tijaabinta qalabka, si aynu tayada wax soo saarka shirkadda iyo protection.Spacing lagu kalsoon yahay boholaha qaybaha muhiimka ah ee shirkadda - dhululubo jack, si gaar ah helitaanka mashiinka qodista laser si loo hubiyo saxnimada achining loo qabto, godka xadka ka, si tayada alaabooyinka in uu ahaa mid u boodboodi ah oo tayo leh.
4.Our waxyaabaha waxaa intooda badan laga dhoofiyay in ka badan 30 dal sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo macaamiisha etc.Our ka mid ah macaamiisha badan OEM ku takhasusay tareen, gaari, forklift iyo mashiinada dhismaha , waxaan hore u soo maray iskaashiga ka badan 10 ka mid ah worldâ ka € ™ s Top 500 shirkadood mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha shubay ay waaweyn ee Shiinaha.
Zhejiang Yipeng Makiinado Co., Ltd.was aasaasay 2006. Taas oo ku taal bartamaha magaalada Yangtze River oo webiga suunka dhaqaale, Jiaxing, halkaas oo u dhow Shanghai, Hangzhou, Ningbo, magaalada Suzhou, iwm waa, in uu yahay mid aad u sahlan tahay gaadiidka . Shirkadda waa a collection of kala duwan Engine Crane, Floor Jack 3t, Floor Gudbinta Jack taas oo ah shirkad jirka ah oo khaas ah, waayo, researchment, horumarka, wax soo saarka iyo iibka ah. Shirkadda daboolaa aag of 1,7000 mitir oo laba jibbaaran, ka qaadataan shirkadda "-SAMIDA ku salaysan, tayada ugu horeysay" falsafada ganacsiga, si ay u siiyaan macaamiisha la soo saarka oo tayo leh, si tartiib tartiib ah, ka mid ah sameynta sumcad wanaagsan in industry ee a, miisaanka ganacsi u korayo. YIPENG rumaysan oo aad ku biiro, waxaa jiri doona berri ka wanaagsan, waxay aaminsan yihiin YIPENG, dooran YIPENG, biiraan YIPENG, waxaan idin siin doonaa adeegga ugu wanaagsan iyo damaanad. Epont farsamo waa a collection of kala duwan Engine Crane, Floor Jack 3t, Floor Gudbinta Jack taas oo ah shirkad jirka ah oo khaas ah, waayo, researchment, Horumarinta, Production iyo sales.1 ah. WAXAAN LEEYAHAY SHURUUDAHA THE: Waxaanu leenahay certificate2 a isreebreebka rasmi ah. Saarka TECHNOLOGY: cilmi joogto ah oo innovation3. Qancinta macaamiisha: Bixi alaabta lagu qanci karo.
1. kuwa aan nahay?
Waxaan ku salaysan yihiin in Zhejiang, Shiinaha, waxay ka bilaabmaan 2006, iibiyay in Southeast Asia (15.00%), Africa (15.00%), Mid East (10.00%), Bariga Yurub (9.00%), North America (8.00%), South America (7.00%), Southern Europe (7.00%), Central America (6.00%), South Asia (6.00%), Northern Europe (5.00%), Suuqa Qoyska (5.00%), Eastern Asia (3.00%), galbeedka Yurub ( 3.00%), Oceania (00.00%). Waxaa jira guud ee ku saabsan 51-100 qof oo xafiiskayaga.
2. sida aan u dammaanad qaadi karaa tayada?
Had iyo muunad pre-soo-saarka ka hor soo saarka mass;
Inspection Had iyo jeer final ka hor shixnad;
3.what aad ka iibsan kartaa naga?
Dhalo Haydarooliga Jack, Haydarooliga Floor Jack, Engine Crane, maqas Jack, Shop Press
4. waa maxay sababta aad ka iibsan ma naga ganacsatada kale?
Epont ayaa maray ISO / TS16949: 2009, ISO9001: 2015 tayada nidaamka maamulka shahaado, si buuxda loo fuliyay nidaamka maaraynta tayada, maray nidaamka shahaado maamulka deegaanka ah, iyo godadka ay u gudbeen CE, Sudee& shahaado TUV